Garsoore Mark Clattenburg Oo Munaafaq Ku Tilmaamay Jurgen Klopp Ka Hor Kulanka Liverpool & Man United Ee Anfield | Laacibnet.net
Garsoore Mark Clattenburg Oo Munaafaq Ku Tilmaamay Jurgen Klopp Ka Hor Kulanka Liverpool & Man United Ee Anfield
January 14, 2021 Balaleti
Garsoorihii hore ee Premier League Mark Clattenburg ayaa ku tilmaamay tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ‘munaafaq’ madaama uu soo jeediyay in Manchester United loogu hiiliyo rigoorooyinka xilli ciyaareedkan.
Ka dib guuldaradii Liverpool ka soo gaartay Southampton horaantii bishaan, Klopp ayaa ka carooday labo rigoore oo aan kooxdiisa loo dhigin, wuxuuna hoosta ka xariiqay farqiga u dhaxeeya rigoorooyinkii kooxdiisa loo dhigay intii uu macalin ka ahaa Liverpool iyo rigoorooyinkii loo dhigay Man United labadii sanno ee ugu danbeysay.
“Waxaan maqlay in Man United loo dhigay labadii sannadood ee ugu danbeysay rigoorooyin ka badan intii Liverpool loo dhigay shantii sanno iyo bar ee aan kooxda joogay” ayuu yiri tababaraha Liverpool.
Tan iyo markii uu Solsljaer bedelay Jose Mourinho bishii December 2018, United waxaa loo dhigay 42 rigoore isla mudadaas waxaa Liverpool loo dhigay 19 rigoore tartamada oo dhan.
Laakiin Clattenburg oo garsoore ka soo noqday 292 kulan oo Premier League ah ayaa qiray in garsoorayaasha aysan u hiilinin Man United isagoo ku eedeeyay Klopp inuu ciyaar maskaxeed ciyaarayo ka hor kulanka ay Liverpool la ciyaareyso hogaamiyayaasha horyaalka maalinta Axada.
Clattenburg ayaa aaminsan in Man United ay heli jirtay go’aano u hiilinaya waayihii Sir Alex Ferguson laakiin ay haatan taasi meesha ka baxday.
“Aan si cad u hadalno, ma jiro eexasho ay sameeyaan garsoorayaasha iyo maamulka ciyaaraha” ayuu Clattenburg ku qoray wargeyska Daily Mail.
“Miyuu Klopp ka hadlayay in garsoorayaasha ay u eexdaan Man United? mise wuxuu soo jeedinayay in ciyaartoyda United lagu dhiirogeliyo inay istuuraan? haddii ujeedkiisa ay aheyd tan hore, markaas waqti uma hayo. Ma ahan wax run ah.
“Laakiin haddii uu ka hadlayay sida sahlan ee ay ciyaartoyda United isku tuuraan markaas waan aaminsanahay inuu qodob sax ah ka hadlo. Xitaa haddii uu iska indhotirayo qaar ka mid ah ciyaartoydiisa oo sidaas sameeya.
“Waa munaafaq haddii uu soo jeedinayo in ciyaartoyda United ay raadinayaan inay rigoore ku guuleystaan. Xiddigaha sida Mo Salah iyo Mane iyaguba taatiko la mid ah ayay adeegsadaan.
“Wuxuu noqonayaa mid walwalsan sababtoo ah tan iyo waqtigii Sir Alex Ferguson ayaa inoogu danbeysay tababare si cad isagu dayaya inuu madaxa ka galo garsoore ka hor ciyaar weyn, Klopp sidaan ma uusan sameyneynin xilli ciyaareedkii hore markii ay Liverpool badineysay isbuuc walba.
“Ma jecla guuldarad, waligiis ayuu sidaas ahaa. Laakiin wuu ku qaldan yahay inuu soo jeediyo in loo hiiliyo Man United.
“Waa loo hiilin jiray waqtigii Fergie uu joogay laakiin tan iyo markii uu tagay taasi meesha waa ay ka baxday.”
In loo hiilin jiray afkaga ma ka haynaa horta ? Hhhhh garsorayal ayaba qirtay inay ku qaldanayeen lpc ee madiga difaaci garsoorayasho dhan?
Premar league cadaaladi ma jirto liverpool aad baa loo dhiba
Markii shaqada laga tago miyaa daacad lo hadla what a shame